Krokodilyarium e Yalta - nezwe elimangalisayo ezihuquzelayo. Izibuyekezo nezithombe zezivakashi
Amazing eCrimea ongaqondakali nemvelo layo eliyingqayizivele zokungcebeleka eziningi ayilokothi iyeke ukujabulisa izivakashi. holidaymakers abaningi bakhetha ukulandela ehlukahlukene amaholide abo kule ndawo enhle kangaka ngazo zonke izinhlobo zezinto hambo. Peninsula resort ngamunye has ezikhangayo ayo, kodwa isibalo esikhulu sezinto nabo basuke bagxila elisogwini oluseningizimu ye eduze Yalta akhishwa imisebe yalo.
Krokodilyarium e Yalta ezithakazelisayo futhi kufinyeleleke
Umuzi Yalta uhlobo resort inhlokodolobha eCrimea. Izivakashi ukufuna lapha ashona energy alo, bahamba ngezinyawo phezu kwezingqimba ukuvakasha abadumile nenhle futhi sivakashele izindawo ezithakazelisayo, okuyizinto abaningi lapha. Omunye hambo yakamuva futhi kakhulu, okuzoba ezithakazelisayo kokubili abadala kanye nezingane, uhambo Yalta krokodilyarium. Uma uke wavakashela kakade zoo adumile kanye dolphinarium futhi oceanarium ke kufanele nakanjani vakashela kuleli zwe emangalisayo ezihuquzelayo.
Krokodilyarium e Yalta ungavakashela nanoma ubani intengo kuqhathaniswa yeningi. Intengo Ticket abadala kuyinto ruble 400 kuphela, kanti ingane ngisho eshibhile - ruble 300. Izivakashi bangase bakhethe ifotho izilwane, ziyise ikhamera - lokhu kuhlanganisiwe imali ithikithi.
Ngo-2010, e Alushta aquarium yazalwa eminyakeni engaphezu kwengu ayisikhombisa Afrika Nile izingwenya. silwane iqoqo ngaleso sikhathi kwaba kunalokho enkulu kakade, futhi-ke kwakudingekile ukuba axazulule zonke, ukunikeza ngamunye ekhoneni ethokomele. Aquarium lazo zonke ezifuywayo yakhe abukhali-toothed Sengiminyene.
Khona-ke ukuphathwa kanye umqondo yokudala yokukhosela entsha ngoba ezihuquzelayo, lapho babekwazi ukuphila ngokugcwele futhi qiniseka ukuba azale ande. Ngokushesha izilwane wacosha ikhaya laphakade - krokodilyarium e Yalta.
nursery Ingwenya iqukethe iqoqo elikhulu abakhileyo iplanethi yethu, ikheli unomphela yokuhlala okuyinto manje eminingi yasendulo: Yalta edolobheni, Krokodilyarium. Izithombe kwalezi zilwane ezinhle kungabonwa ku-athikili yethu.
Izakhamuzi ezivame kakhulu zoo ethize - Nile izingwenya. Ngaphandle saseNayile, bahlalaphi nezinye izingwenya --Cuban, caimans, ivelakancane izingwenya Siamese, ostroryly nabanye.
Ngalezi izilwane esesabekayo owethulwe lapha nezinye isigaba esikhethekile Awezinyoka (ezihuquzelayo -. Amagama azo e ngezigaba wesibili) - izimfudu, iguanas, izibankwa, njll Isithombe ngaphezulu sibonisa iguana oluhlaza, zimila Esiqhingini saseMadagascar.
Kuyaphawuleka ukuthi amalungu amaningana siphile zinhlobo lasendulo kakhulu ufudu ngokuthi loggerhead e nursery ingwenya. Lona omunye ufudu ngobukhulu, ubude baso sifinyelela amamitha nenxenye. Bona agcinwa aquarium ezinkulu ezigcwele amanzi, futhi ngenxa nolaka ukuziphatha congeners zabo nezinye zinhlobo podselyayut kubo.
Hlangana e krokodilyariume zingaba izintaba tiger nenhlwatsi, okuyizinto amamitha angaphezu kwamane ubude, ukuze insikazi efanayo kuyinto python albino.
Ummeleli ezithakazelisayo wohlobo - ufudu zmeinosheynaya - futhi bahlala indlu yenja. Intamo yomuntu le ufudu lide kakhulu.
Bala lo ezihuquzelayo kungaba isikhathi eside kakhulu, kodwa kungcono ukuvakashela epulazini futhi ubone ngamehlo akho.
Yalta, krokodilyarium: kanjani ukuba uthole
Uma unquma ukuvakashela kule ndawo okungavamile, uyithola emiphongolweni. It posted zoo exotic ingxenye yayo eyinhloko yezinkolo Yalta. Krokodilyarium ikheli lakhe - emgwaqweni. Ignatenko, inombolo yendlu 1, ingatholakala kalula kakhulu. Futhi ukuze uthole ngokushesha kusukela kunoma iyiphi ingxenye yedolobha njengoba itholakala amamitha 50 kusukela ukuvakasha main, Ukubala travel, ngenhla nje cafe "McDonald".
Ivula amahora ngenkathi - kusuka 10 ekuseni kuya ku-10 ebusuku.
Omunye angase afunde ulwazi yokukhangisa mayelana krokodilyarium e Yalta, kodwa ukuhlolwa Inhloso yalo uhambo kungenziwa kuphela ukunikeza impendulo esuka izivakashi. Nakuba bayakukholelwa noma cha, ngamunye uchaza yena.
Vakashela izinkundla kanye amasayithi kanye nokuhlolwa krokodilyariume izivakashi sika e Yalta, singaphetha ngokuthi cishe zonke izimenywa basutha ne uhambo. Ikakhulukazi umxhwele nabameleli abantwana abancane - izingane.
Ngena ngemvume krokodilyarium, ukubuyekezwa izivakashi, it is kahle kakhulu ehlotshisiwe Nokho, egumbini elingaphansi futhi usayizi encane.
Izivakashi bathi lonke uhambo kuthatha cishe ihora. Phakathi nalesi sikhathi, ungakwazi ubukeza konke abameleli zoo futhi ukuthatha izithombe kokuchichimileyo kwabo.
Okuvelayo Omuhle ukuvakasha
Ngaphezu uhlobo input, cishe zonke izimenywa we zoo bathi ukuhleleka wokuqala amakamelo. Njengoba uma uthola emhumeni, izivakashi ukubhala bese ukhomba ku wezangaphakathi engavamile iyezwakala.
Izimpendulo ezivela izivakashi, izilwane zoo mini yavama. Bonke bangabangasokile uzilungise futhi bondlekile.
Omunye izinzuzo ezisobala krokodilyariuma uvakashele cishe zonke izivakashi ithuba aveze ukondla izilwane. Ukuze $ 100 induku ende ahlukaniswe iqatha lenyama, bese ngubani angakwazi ukondla izingwenya ngokwabo. Toothy prozhory ujabule amunca ukudla ehlongozwayo nezingane bajabule ziyanswininiza injabulo.
Izivakashi bhala ukuthi izingwenya freeze endaweni, futhi akekho noyedwa ngomzuzu cishe kungahambi, futhi ungase ucabange ukuthi kungcono nje Injengesithusamagwababa.
Ezinye izivakashi bathi amathangi e-zoo ezinhle, kodwa kukhona nalabo bhala mayelana lokuthi yokuthi mincane kakhulu nezilwane abazifuyile. Kodwa namanje kufanele kusho ukuthi Izibuyekezo omuhle kule akhawunti okuningi.
Ukuvakashela krokodilyarium e Yalta, ukubuyekezwa kwi-inthanethi yebo ungabhali lutho, ngakho sizoqhubeka kusukela lokuthi kukhona. Kufanele ukuthi imizwelo engafanele ukuba ahambele krokodilyariuma Yiqiniso, zikhona, kodwa abaqiniseki kakhulu ukwedlula omuhle.
Ezinye izivakashi bathi ithikithi zoo eqolo ngoba uhambo letimfishane.
Kunemibono ehlukene mayelana iziqondiso: abanye bathi izindaba zakhe kukhona okuthakazelisayo nokuwusizo, kuyilapho abanye bakhononda ngokuthi umhlahlandlela engazange abe khona, ngomqondo ongokomfanekiso, njengoba kunjalo, eqinisweni, kuphela kusukela isipiliyoni sami siqu. Futhi ukuze alenze libonakale, ukuvakashela kule ndawo angavamile.
Divnomorskoe, amanzi ipaki: imizwelo, ukuzijabulisa
Bank Ibhuloho e Saint Petersburg: litje lesikhumbuto esidlule nge ithemba lekusasa
Amagama we-Maxim - usuku lokukhumbula ingelosi yakhe yokugcina
Izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni kanye ukubaluleka kwabo ezweni lanamuhla
Routers GPON: izici, izilungiselelo uxhumano